Michael Gross na njem nke Burt Gummer & 'Tremors: Coldbọchị Nzuzo na Hel' - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Michael Gross na Njem nke Burt Gummer & 'Tremors: Coldbọchị Nzuzo na Hel'
Michael Gross na Njem nke Burt Gummer & 'Tremors: Coldbọchị Nzuzo na Hel'
edere ya Waylon Jordan April 27, 2018
Ọ bụrụ na ị jụọ Michael Gross, ọ ga-agwa gị na ọ bụ ya kacha nwee ndụ. Ọ bụghị nanị na ọ nwetara igwu egwu otu n'ime ndị nna TV dị egwu na sitcom "Family Ties", mana mgbe ihe nkiri ahụ gwụrụ, ọ rutere ọrụ nke ndụ dịka Burt Gummer, onye na-agba egbe na-atụ egwu na egwu jọgburu onwe ya. -Nchịkwa aha Egwuregwu.
Gross, onye na - agaba ugbu a na ntinye aka nke isii Mojọ: Coldbọchị Nzuzo na Hel, na nso nso a na iHorror nọdụrụ ala ịkọ maka njem ya dị ịtụnanya na otu o si malite site na ịme akụkọ telivishọn.
"Kinddị were ihe ndị a ka ihe dị mfe mgbe ị na-eme ha, ị maghịkwa ihe ha pụtara nye ndị mmadụ mgbe ị na-eme ha," ka onye nkiri ahụ kwuru. “Mana mgbe anyị bidoro ime Ezinaụlọ gbasara ihe kacha mkpa n’afọ 1982, ihe nkiri a na-ege n’ebe dị anyị nso na-ese‘ Taxi ’n’ebe ahụ. 'Laverne & Shirley' na 'Obi Happytọ'bọchị' ka na-egwu egwu, 'Joanie hụrụ Chachi n'anya' nọ n'otu ebe a na-eme ihe nkiri. "
Ihe nkiri a ruru iri nde mmadụ abụọ na-ekiri ya kwa izu, ka ọ na-eru na njedebe na 28, Gross juru ya anya mgbe ohere nke ohere a na-atụghị anya ya meghere.
"Nke mbụ Egwuregwu bụụrụ m ezigbo obi ụtọ n'ihi na ọ mere site n'ọnụ ụzọ ámá mgbe 'Family Ties' na ọ zara ajụjụ abụọ, "ka o kwuru. “Ndụ ọ̀ ga-adị ma‘ E nwee Njikọ Ezinụlọ ’? Ndị mmadụ hà ga-anabata m dị ka ụdị àgwà dị nnọọ iche? ”
N'agbanyeghị nke ahụ, mgbe ọ gachara nnukwu ọrụ na ihe nkiri na-egwu ọtụtụ ọrụ kwa afọ, Gross enweghị ezigbo nsogbu ịme mgbanwe ahụ. N'ezie, ọ dị njikere karịa ime ya, yana ọ happyụ igosipụta ndị nkatọ na-ezighi ezi.
“Togwa gị eziokwu na mgbanwe ahụ esighị ike. Edere ya nke ọma na echere m na amaara m nwoke a site na mmalite, "Gross kọwara. “Eleghị anya enwere m ahụ erughị ala karịa igwu egwu Steven Keaton nke bụ onye nkịtị. Ọ na-amasị m igwu ndị nzuzu, otú ahụ ka ndị mmadụ na-akpachikwu anya. ”
Michael Gross na Reba McEntire na mbụ Tremors
Maka Gross, Otú ọ dị, igwu egwu Burt gbadara ije ije dị ezigbo mkpa, ọ nọrọ ọtụtụ oge na-eche banyere mgbe ma ọ bụ "onye nzuzu nwere ọtụtụ egbe" na-atọ ọchị, na mgbe ọ ghọrọ ihe dị egwu? Nke a ghọrọ ajụjụ a kapịrị ọnụ n'ihi ìhè nke ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ogbugbu mmadụ.
“Ọ bụ ya mere anyị ji mesie ike isi ike na-achị ụkpụrụ kadinal nke Egwuregwu, ”Ihe nkiri ahụ kwuru. “Onweghi onye gbanwere egbe ya n’ebe mmadụ ọzọ nọ na fim anyị. Humansmụ mmadụ bụ ezigbo ụmụ okorobịa na nnukwu anụ ọjọọ. Anyị niile bụ ezinụlọ mmadụ na-alụso ezigbo onye iro ọgụ. ”
Ọ bụ naanị otu n'ime ihe ndị gbakọtara ọnụ nke na-eme ka aha ahụ nwee ihe ịga nke ọma, n'agbanyeghị nke ahụ, mgbe ihe nkiri mbụ ahụ gasịrị, ọ dị ka ọ nwụrụ tupu ọ malite.
Ndị na-emepụta amachaghị etu esi ere ahịa nke mbụ Egwuregwu mgbe a tọhapụrụ ya na ụlọ ihe nkiri. Ha kwere ndị na-ege ntị nkwa ihe nkiri egwu egwu ma ghara ịnyefe. Mgbe nanị izu abụọ nọ na ụlọ ihe nkiri, a dọtara fim ahụ ma zigara ya vidiyo.
Na mgbe ahụ ihe anwansi mere.
Oge mbu 90s bu ubochi ebube nke ulo ahia mgbazinye vidio, na Egwuregwu nọmba mgbazinye malitere itolite n'ike n'ike. Ọ bụ ụdị òtù a na-agbaso na ọ dịghị onye na-atụ anya ya na ọ dịghị onye juru ya anya karịa Gross mgbe ọ kpọrọ oku ka ọ hụ ma ọ ga-enwe mmasị ịme usoro.
“Ndị mmadụ kpọrọ m mgbe afọ ndị ahụ nile gasịrị wee sị, 'Ì kwere na anyị ga-eme aha ọzọ?' m wee sị na agwaghị ha ya, ”Gross na-achị ọchị. “Ma o doro anya na ọ gaferela dị ka obere nzuzo nke mmadụ adịghị ọcha. Ọ na-ejide, ndị mmadụ chọkwuru ihe. ”
“More” sụgharịrị Gross 'ọrụ na-ewere ihe a Central ntụpọ na mkpokọta aak nke aha. Ọ nyere Gross ohere iji mara onye Burt Gummer bụ na ihe kpatara ya iji mee nhọrọ ndị ọ mere.
“Mgbe anyị batara Ịma jijiji 5, M gwara ha na anyị chọrọ ihe ịma aka ndị ọzọ maka Burt. Anyị maara na ọ nwere ike ichu nta. Ma olee otú anyị pụrụ isi maa ya aka? ” Gross kwuru. “Anyị kpọbatara nwa ya nwoke wee jụọ ya, sị, 'Olee otu onye nwere ike isi chee na e nwere onye ọzọ chọrọ ịbụ akụkụ nke ndụ ya?'”
Ọ bụ, dịka o siri pụta, ihe ịma aka na-atọ ọchị ma dị egwu nke Burt karịrị maka na n'ikpeazụ ya na nwa ya nwoke bịara… nke ọma, ka anyị kpọọ ya ọgba aghara.
Jamie Kennedy na Michael Gross na Tremors
Site na ihe nkiri kachasị ọhụrụ, Burt na nwa ya nwoke, Travis (nke Jamie Kennedy na-egwuri egwu), na-achụ nta Graboids ọnụ, oge a n'akụkụ ugwu nke Canada ebe Burt na-eche nnukwu nsogbu ya ihu, mana: ọnwụ nke ya.
“Olee otu nwoke onye ikike ya si bụrụ ihe kachasị mkpa na ndụ ya na-achịkwa njikwa ya?” ihe nkiri ahụ jụrụ. “Ọ bụ ihe kachasị sie ike na ndụ ya enweghị ike ịlụ ọgụ.”
Mojọ: Coldbọchị Nzuzo na Hel, nke ga-eti DVD na Blu Ray na May 1st, gosipụtara na aha ikike a efunahụ ọfụma ọ bụla. N'ezie, Egwuregwu nwere ike ịbụ ụdị aha kachasị agbanwe agbanwe nke ụdị ya. Ha ka ga-ahapụ ndị na-agbapụ ha, na dịka Gross kwuru na njedebe nke ajụjụ ọnụ anyị, ndị Fans ahụ ga-emecha kpebie ihe ga-eme usoro atụmatụ a.
Ọ kọwara, sị: “You nweghị ike ikwu ihe ga-eme. Ana m ekwukarị okwu megide Hollywood. Gosi azụmahịa bụ 5% show na 95% azụmahịa mana ọ bụrụ na isii na-eme nke ọma, echere m na anyị nwere ohere ịlaghachi. ”
Lelee ụgbọala na-adọkpụ maka Mojọ: Coldbọchị Nzuzo na Hel n'okpuru wee chọọ ya na DVD, Blu Ray na VOD na May 1, 2018!
Ajụjụ ỌnụMichael GrossEgwuregwuịma jijiji: ụbọchị oyi na helUniversal PicturesWaylon Jordan
'Ihe nketa' ihe nketa na-akpata ọgba aghara na ngosi nke 'Peter Rabbit'
Stephen King 'Long Walk' Wanders na New Line Cinema